Mmemme 5 iji mepụta gifs ngwa ngwa na ngwa ngwa | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | General, software
GIF dị adị kemgbe oge ochie, anyị na-eji ha oge ọ bụla anyị nwere ike, ugbu a karịa sistemụ arụmọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ekwentị niile gụnyere ha n'etiti nhọrọ keyboard ha. GIF bụ okwu pụtara Nkọwapụta eserese eserese ma ọ bụ na ntụgharị eserese na Spanish. Ọ bụ ụlọ ọrụ nkwukọrịta North America mepụtara usoro a, ọ na-akwado a kacha nke 256 agba na-akpọ azụ a usoro nke ihe oyiyi na-adịgide adịgide n'etiti 5 na 10 sekọnd. Ha enweghị ụda na nha ha pere mpe karịa faịlụ JPG ma ọ bụ PNG.
Ọ na-adịkarị ịchọta GIF kama MeMes ndị a na-ahụkarị, ebe ọ bụ na ndị a na-agagharị ma na-agwa anyị karịa ihe oyiyi dị iche iche. Ọ na-ahụkarị ịhụ ha na ntanetị n'ịntanetị ma ọ bụ na Twitter, ọ bụ ezie na ugbu a ọ dị mfe ịhụ ha na WhatsApp. Ma, Kedu ihe kpatara iji GIF sitere n'aka ndị ọzọ mgbe anyị nwere ike ịmepụta nke anyị? Enwere ụfọdụ mmemme na-eme ka ọrụ a dịrị anyị mfe. N'isiokwu a, anyị ga-egosi mmemme 5 kacha mma iji mepụta GIF ngwa ngwa na ngwa ngwa.
2 Onye na -eme ihe nkiri GIF SSuite
5 Onye kere Giphy
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ usoro mmezi foto ọkachamara na-ejikarị dị ka ihe ọzọ na PhotoShop, nke nwekwara ike iji mepụta GIF kacha mma. N'etiti ọtụtụ ọrụ ya bụ nke ịmepụta GIF, mana maka nke a Ihe onyonyo anyi choro idezi gha aghaghi idi na PNG. Ọ bụ ezie na mmemme a zuru oke, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya maka ndị na-enwechaghị ahụmahụ, ebe ọ bụ na nhọrọ ya buru oke ibu na ọ karịrị.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwale ya ma mepụta GIF nke anyị na mgbakwunye na ịdezi foto anyị dịka ezigbo ndị ọkachamara, anyị nwere ike ibudata ma wụnye ya n'efu na ibe ya gọọmentị webụsaịtị. Usoro ihe omume dị ma maka Windows maka MacOS.
Onye na -eme ihe nkiri GIF SSuite
Ọ bụrụ na anyị na-achọ usoro dị mfe ma dị irè mgbe ị na-eke gifs anyị, nke a bụ nke anyị na-achọ. Faịlụ na anyị ga-eke si a mmemme ga-dakọtara na niile dị ugbu a na ihe nchọgharị weebụ na anyị nwere ike ịkekọrịta ma lelee ha n'enweghị nsogbu ọ bụla. Iji mee nke a, ọ ga-ezuru iji tinye onyogho ndị anyị chọrọ idezi n'ụzọ ziri ezi, iji mepụta ihe ngosi ahụ n'ụzọ ziri ezi. Anyị nwere ike ịhazi oke niile, site na oge ikpughe na ọsọ ya.
Onye nchịkọta akụkọ na-akwado usoro JPG, PNG, BMP na GIF. Ihe kacha mma banyere mmemme ahụ bụ na ọ dị oke ọkụ na 5MB eleghara anya ma ọ chọghị ntinye tupu. Anyị nwere ike ibudata ya kpamkpam na ibe gị gọọmentị Weebụ.
Ngwa e mere maka naanị maka okike nke GIF. Ngwa a anaghị achọ ahụmịhe dị ukwuu na ndị editọ foto ebe ọ dị mfe iji ma ga-enye anyị ohere ịmepụta GIF anyị na usoro dị mfe, na-etinye ihe oyiyi ahụ n'usoro ziri ezi ma na-agbanwe oge ikpughe na mmasị anyị. Ọ bụ ihe eji eme ihe eji emeghe ya ọ bụ n'efu ma ọ chọghị ntinye tupu oge.
Enwere ike iji ngwa ahụ site na pen pen ma ọ bụ diski diski mpụga n'ihi na ọ chọghị ntinye na sistemụ arụmọrụ. Ọ na-akwado ọtụtụ formats gụnyere PNG, JPG, BMP na GIF. Agbanyeghị na ọ chọghị nrụnye, anyị ga-enwerịrị Java emelitere n'ime otu anyị. Nkọwa ya dị nkenke ma ọ dị mfe ma na-adọnye ya oge dịtụ elu, mana nsonaazụ ya bụ ihe a tụrụ anya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ngwa a ị nwere ike ibudata ya na websaịtị nke okike
Otu n'ime ụlọ kachasị mma maka edezi foto. Ngwa a juputara na nhọrọ maka edezi foto, kamakwa nhọrọ iji mepụta GIF anyị. Anyị na-ahụ ọtụtụ nhọrọ ndị agbakọtara ọnụ nke na-enye anyị ohere ịmezi ma melite foto anyị ngwa ngwa. Iji mepụta gifs anyị ga-eji ọtụtụ foto iji mepụta onyonyo eserese. Ihe omume a bu ihe omimi ma di mfe iji, ma dika GIFtedMotion, o di nwayọ ma sie ike mgbe nhazi, obu ezie na ihe ogwugwu kwesiri ya, enwere ndi ozo.
Ihe omume a zuru oke dika nke ndi gara aga ma anyi nwere ike ibudata ya n'enweghi ndebanye aha ya na peeji nke ya gọọmentị Weebụ.
Onye kere Giphy
N'ikpeazụ, mmemme nke na-apụ apụ maka ịdị mfe nke iji ya na mmekọrịta enyi na enyi. Na ya anyị nwere ike ịmepụta animated gifs for free in just a few minutes. Enwere ike ịmepụta ha site na usoro ihe oyiyi esere na saịtị ma ọ bụ site na gallery nke onwe. Ọ bụ ezie na anyị nwekwara nhọrọ iji mepụta gifs site na vidiyo ma obu site na ulo akwukwo anyi ma obu site na YouTube ma obu ihe nlere vidiyo ndi ozo. Obi abụọ adịghị ya na ngwa nke na-enye ọtụtụ egwuregwu mgbe ị na-ekepụta onyonyo anyị esiri ike iji mee ihe ọ bụla.
Ihe kacha mma gbasara ngwa a bụ na ọ bụ ngwa Weebụ ka anyị ghara itinye nrụnye ọ bụla gara aga, naanị tinye gị gọọmentị webụsaịtị ma jiri otu n’ime ọrụ ya dị iche iche ọ na-enye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Mmemme 5 iji mepụta gifs ngwa ngwa na ngwa ngwa
FreeBuds 4i: Huawei laghachi na isi / ọnụahịa isi